‘पुष्पा’ ब्लकबस्टर भएपछि रश्मिकाले बढाइन् पारिश्रमिक, कति लिन्छिन ? - ramechhapkhabar.com
‘पुष्पा’ ब्लकबस्टर भएपछि रश्मिकाले बढाइन् पारिश्रमिक, कति लिन्छिन ?
साउथ चलचित्र ‘पुष्पा’ बक्स अफिसमा ब्लकबस्टर भएसँगै अभिनेत्री रश्मिका मन्दनाको क्रेज चुलिएको छ । ‘पुष्पा’ले हिन्दी भर्सनमा समेत बम्पर कमाइ गरेपछि रश्मिका उत्साहित छिन् ।
ऋतिक रोशनकी पूर्वपत्नी सुजैन खानलाई ओमिक्रोन संक्रमण
बलिउड नायक ऋतिक रोशनकी पूर्वपत्नी सुजैन खानलाई कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको छ। खानले आफू ओमिक्रोन भेरियन्टबाट संक्रमित भएको सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी गराएकी छिन्।
सुजैनले इन्स्टाग्राममा पोस्ट सेयर गर्दै लेखेकी छिन्, ‘कोभिड-१९ लाई विजयी प्राप्त गरेको दुई वर्षपछि यो जिद्दी ओमिक्रोन भेरियन्टले मेरो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई नष्ट गरिदियो।’
‘सोमबार राती मेरो टेस्ट पोजेटिभ आयो। कृपया सुरक्षित रहनुहोस् र आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्। यो धेरै संक्रामक छ,’ उनले इन्स्टाग्राममा लेखेकी छिन्। सुजैनको यो पोस्टमा उनका साथी र फ्यानले उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् ।